Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray on PC
Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Memory Card (ama Flash Drive)
Qaar ka mid ah talooyin u soo celinta photos tirtiray iyo sawirada nabad
Ma aha xaalad aan caadi ahayn in badan oo inaga mid ah si loo soo afjaro ilaa iyo in si qalad ah la tirtiro waa aanu ugu cadcad ee photos ka our card computer iyo xusuusta; waxaan oo dhan ku sameeyey hal mar ama kan kale. Waa macno qalbi jebinaysaan inay u arkaan kuwii oo dhan daqiiqado jecel ee noloshaada la wada baabbi'in Xaq hore ee indhahaaga iyo in aad tagtay weligood dumaya, kaliya click ah button ah oo lagu magacaabo 'tirtirto'. Sad, miyaanay ahayn?
Waa hagaag, ma si sax ah maadaama ay jiraan siyaabo badan oo aad weli soo kaban karto, kuwa photos qaali ah Diintiinii. Haddii aadan horay u ogaado, waxaan doonayaa in aan kula wadaagi qarsoodigan. Sidaas, kalsoonow,
Qaybta 1aad Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray on PC
Haddii aad hadda uun tirtiray sawiro aad, waxay u badan tahay in ay la soo dhaqaaqay Recycle Bin ee your computer. Iyo, haddii ay dhacdo in aad soo ururiyeen oo Recycle Bin sidoo dibna sidoo kale waxaa jira jid inuu ka soo kabsado photos kuwa, aynu sharax kuu tallaabooyinka fudud.
• Recycle Bin aan loo madhiyo weli - Sidee inuu ka soo kabsado ka photos tirtiray ka Recycle Bin
Haddii aad si qalad ah la tirtiro sawirrada, ka hor inta aanad wax ka qaban, tag desktop heli icon ee Recycle Bin (sida aan ka arki on xaq u xad-dhaaf ah sare ee shaashadda this).
Marka aad hesho, qaado dulqabo u icon Recycle Bin iyo riix si aad u furi. Hadda Waa in aad aragto sawiro aad halkan tirtiray ee folder Recycle Bin.
Hadda, labada jaraa'id badhanka oo oranaya "U wada celi wax items 'dusheeda sida ku cad shaashada si loo soo celiyo dhammaan faylasha ee Recycle Bin. Haddii aad rabto in la soo celiyo oo kaliya set gaar ah oo photos, ka dibna aad samayn karto click ah xaq on sawirada kuwa si gaar ah ka dibna riix qaybta 'Soo Celinta ".
• Recycle Bin ka shubeen, ka dibna u isticmaali Wondershare Data Recovery in iskaan ceshan
Ku rakib Wondershare qalabka Recovery marka hore adigoo gujinaya halkan. Markaas abuurtaan software iyo doorto ikhtiyaarka ah 'lumay Recovery File' si ay u bilaabaan.
Hadda shaashadda soo socda waa in ay muujiyaan oo dhan drives computer. Dooro mid ka mid ah in aad la tirtiro files ka guji badhanka 'Start'.
Wondershare Recovery Tool hadda waa in ay bilaabaan baar drive iyo in yar seconds soo bandhigaan natiijooyinka si aad u.
In shaashadda soo socda la soo bandhigay natiijada u eegis, by default dhammaan faylasha waxaa lagu soo xulay aad u mar hore. Deselect kuwa aadan rabin inuu ka soo kabsado oo riix badhanka 'Ladnaansho' iyaga badbaadiya, si aad u computer.
Part 2 Sidee inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Memory Card (ama Flash Drive) - isticmaali kabashada Photo Wondershare in ay dib u hesho sawiro tirtiray
Wondershare Photo Recovery waa shaqo fiican ayuuna software miiqan waa u fududahay in la isticmaalo iyo interface ayaa ah in dayn doonaa inaad iska soo kabsado photos tirtiray la qasabno yar.
Riix halkan si dejisan iyo rakibi Wondershare Photo Recovery on your computer. Burcad software ah iyo in la hubiyo in aad Flash Drive xiran yahay your computer doorataa mid ka mid ah 4 siyaabo sida hoos ku siiyey in shaashada ka. Markaas riix badhanka 'Start'.
Dooro drive, taas oo xogta uu ku yaalay ka hor inta aadan lumay ka dibna riix 'Scan'.
Marka iskaanka lagu sameeyo, waa in aad arki bandhigay natiijada oo dhan sanamyadeedii ku qoran oo aad soo kaban karto. Dooro kuwa aad u baahan tahay adigoo calaamadaynaya sanduuqa horteeda iyaga oo ka mid ah ka dibna ku dhuftay 'Ladnaansho'.
Hadda, waa inaad heshaa fursad u ah in ay doortaan jidka halka aad rabto in sanamyada soo kabsaday si ay u badbaadaan. Hubi in aad ka dooran meel kale oo aan drive ka mid ah oo aad ka luntay images ee meesha ugu horeysa oo ka dhacay 'Ladnaansho' mar kale.
Part 3 talooyin Qaar ka mid ah u soo celinta photos tirtiray iyo sawirada nabad
Haddii aad tirtiray sawirada qalad ah ka dibna waa in aad si degdeg ah u joojiyaan wixii waxyeelo dheeraad ah oo aan sii si loo badbaadiyo wax files cusub ee drive ka mid ah.
Ha Wondershare Photo Recovery iskaan dhamaystiran buuxda ka hor inta aadan wax kale u natiijo ka wanaagsan sameeyo.
Isticmaal ikhtiyaarka ah 'Save Scan' si loo badbaadiyo natiijada scan iyo u isticmaashaa soo kabashada sawir joogto ah mar kasta oo aad u baahan tahay, oo aan haysan si rescan.
Ugu dambeyntii, ka, sii sawiro aad ammaan iyaga oo taageero ilaa drive kale ama wax oo is ogow ka hor inta aadan iyaga tirtirto.
> Resource > Memory Card > siyaabo la taaban karo inuu ka soo kabsado photos tirtiray ka Computer iyo Memory Card